Ungayifaka kanjani iMacOS Sierra 10.12 kusuka ekuqaleni, igxathu negxathu | Ngivela kwa-mac
Ungayifaka kanjani iSierra kusuka ekuqaleni
UJordi Gimenez | | macOS Sierra, Izifundiswa
Ufuna faka iSierra kusukela ekuqaleni? Sibheke uhlelo olusha lwe-Apple olusebenzayo lwama-Mac futhi uma sesilulande kwikhompyutha yethu, esikuncomayo ukufaka kusuka ekuqaleni ukuqeda noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezisusiwe, amaphutha noma yini engalimaza umuzwa ngenguqulo entsha ye uhlelo.
Iqiniso ukuthi lolu hlobo lwezibuyekezo ezibalulekile kuyelulekwa ukuthi uzenze kusukela ekuqaleni yize kungeyona imfuneko ebalulekile, okungukuthi, Uma ungafuni ukufaka iMacOS Sierra kusukela ekuqaleni, mane uyilande ku-Mac App Store bese uqhafaza ku-install. Ngaphambilini, sikweluleka futhi ukuthi wenze isipele uma kwenzeka okuthile kungahambi kahle, kepha empeleni ayinayo imfihlo engaphezu kwaleyo. Lapho-ke uma ufunda lokhu kungenxa yokuthi ufuna ukufaka iMacOS Sierra kusukela ekuqaleni ku-Mac yakho, ngakho-ke Ake sibone izinyathelo zokukwenza kusuka ku-USB ebhuthazayo.
Okokuqala khumbuza bonke abasebenzisi abafuna ukubuyekeza iMac yabo kusuka ekuqaleni ukuthi bakhona izindlela eziningana ezifanele ngokuphelele zokwenza ukufakwa okuhlanzekile kepha esisebenzisa njalo ithuluzi le-DiskMaker engalandwa ngqo kusuka kuwebhusayithi esemthethweni futhi lapha sikushiya isixhumanisi. Empeleni kuyindlela yokwenza ibhuthoni ye-USB futhi ukwazi ukufaka isistimu yokusebenza entsha kusuka ekuqaleni futhi isebenza kahle kakhulu kithina ngakho siyaphinda Inqubo ifana kakhulu nezikhathi ezedlule kepha sizobona igxathu negxathu ukuze konke kucace kusukela ekuqaleni.
Imininingwane ebalulekile kulawa macala ukuthi ukufakwa kusuka ekuqaleni noma noma ngabe sizokwenza isibuyekezo sohlelo ngqo ohlelweni lwamanje, ukwenza yonke inqubo nge IMacBook ixhunywe ku-router ngekhebula futhi ngasikhathi sinye ixhunywe kunethiwekhi kagesi ukugwema izinkinga ezingaba khona zombili ekulandweni nasekuvuseleleni.
1 Fometha i-USB / SD
2 I-DiskMaker X
3 Ukufaka i-MacOS Sierra 10.12
4 Idatha ebalulekile
Fometha i-USB / SD
Into yokuqala futhi uma sifuna ukuqhubekisela phambili umsebenzi ngenkathi iMacOS Sierra 10.12 entsha ilandwa ku-Mac yethu, ukwenza ifomethi ye I-USB noma ikhadi le-SD elingu-8GB noma ngaphezulu esikudingayo ukufakwa okuhlanzekile kohlelo lokusebenza ukuze sikuxhume echwebeni le-USB leMac bese siqala. Inqubo ilula futhi kufanele nje singene Disk Umbuso okuyi Ezinye ifolda ngaphakathi I-Launchpad. Uma usungene ngaphakathi sikhetha i-USB / SD bese uqhafaza ukusula, siyengeza el Ifomethi: Mac OS Plus (Journaled) bese sibeka igama esilifunayo noma ngqo iMacOS Sierra. Ikhadi le-USB noma le-SD elisetshenziselwe le nqubo lizosulwa ngokuphelele, ngakho-ke qaphela idatha esinayo ngaphambi kokwenza inqubo.
Lapho i-USB / SD yethu isilungile, ithuluzi le-DiskMaker selikulungele ukwenza i-bootable disk nokulandwa kwe-MacOS Sierra ku-Mac yethu, singaqala inqubo. Nge-USB / SD exhunywe kwi-Mac chofoza isithonjana seDiskMaker mayelana nenketho ye ukufaka i-OS X El Capitan (sicabanga ukuthi iMacOS Sierra izovela kungekudala) isebenza kahle nge-MacOS Sierra bese uchofoza ukulanda okwenziwe ngaphambilini kwe-MacOS Sierra okuzoba kufolda yezinhlelo zokusebenza njengesifaki.
Manje isicela iphasiwedi yomlawuli ngakho-ke siyibeka futhi chofoza ukuqhubeka. Manje yisikhathi sokulinda ukuthi inqubo yokufaka iqede ku-8GB USB / SD uma kuthatha ukuthula okuncane, kuyinto ejwayelekile. Akunasimo lapho sizovala uhlelo, sikhiphe i-USB / SD kwi-Mac noma sicishe ikhompyutha. Uma sesiqedile singaqala Inqubo yokufaka ehlanzekile ye-MacOS Sierra kufayela lethu le- umshini.
IDiskMaker Kubuyekezwe ukuxhasa iMacOS Sierra. Kepha uma kungakusebenzeli, kukhona abasebenzisi abenze inqubo kusuka kufayela le- ithuluzi I-DiskCreator. Leli thuluzi lokugcina lifana kakhulu neDiskMaker elisetshenziswayo ukudala i-USB.
Le nqubo ingathatha isikhathi eside, ngakho-ke yiba nesineke ngayo. Uma ekugcineni uthola iphutha, ungakhathazeki, kungenxa yokuthi ithuluzi alilungele ngempela iMacOS Sierra Ithuluzi manje lisesikhathini futhi inqubo ihamba kahle. Ngalokhu singabuka i-USB / SD futhi uma isifaki sivela ngaphakathi sichofoza ukuthola imininingwane ngakho (cmd + i) kanye kufanele ingene esikhaleni esingu-4,78 GB. Uma kunjalo, inqubo ihambe kahle.
Ukufaka i-MacOS Sierra 10.12
Lapho inqubo yeDiskMaker ene-USB / SD isiqediwe singadlulela kulokho esinentshisekelo kukho ngempela, okuyi ukufakwa kwesistimu ku-Mac. Ukuqala inqubo kulula njengokucisha iMac ne-USB / SD ixhunyiwe futhi ngesikhathi sokuqala sibamba ukhiye we-Alt Ukuze imenyu yokuqala ivele, sikhetha imemori ye-USB noma ikhadi le-SD lapho sinesifaki seMacOS Sierra futhi yilokho kuphela.
Manje sekuyisikhathi sethu sula i-OS X El Capitan ye-Mac yethu futhi Sikhetha inketho yeDisk Utility bese sisusa ukwahlukanisa kwethu kusuka ku-OS X yamanje oyishiya nayo el Ifomethi: Mac OS Plus (Journaled). Siphuma ku-Disk Utility futhi siqhubeka nokufakwa kwe-MacOS Sierra. Lapho inqubo isiqediwe, manje sesingayijabulela inguqulo entsha yohlelo lokusebenza ngokufakwa okuhlanzekile ngokuphelele.
Sizohlala sincoma ukufakwa kwezibuyekezo kumakhompyutha, kungaba iMac, i-iPhone, i-Apple Watch, i-Apple Tv, njll., futhi isizathu esiyinhloko ukuphepha izibuyekezo ezisinikeza zona kanye nezindaba.
Ingabe ukufaka okuhlanzekile noma okusha kuphoqelekile? cha, akunjalo, kepha noma nini lapho sigxuma sisuka kwesinye isistimu yokusebenza siye kwesinye kuyathakazelisa ukuhlanza iMac futhi ngalokho, yini engcono kunokufaka kusuka ekuqaleni. Ngakolunye uhlangothi, uma singakugwema ukulayisha isipele se-Mac yethu, okungcono, sesivele sazi ukuthi kunzima ukufaka zonke izinhlelo ngamunye ngamunye kanye nezinye, kepha kufanele ucabange ukuthi lokhu kwenziwa kanye kuphela unyaka futhi isipiliyoni sethu se-Mac nesomsebenzisi sizokuthokozela.
Ngivele ngasho ukuthi kunezindlela eziningana zokwenza ukufakwa okuhlanzekile noma kusuka ekuqaleni kweMacOS Sierra kwi-Mac, kepha ngiyithanda ngokwami ​​ngokuthembeka kwayo unyaka nonyaka futhi ngoba nginesifaki unyaka wonke uma kwenzeka kukhona Inkinga ye-Mac noma ukwehluleka. Akuyona imfuneko ebalulekile ukuvuselela iMac kusukela ekuqaleniLokho kuxhomeke kumuntu ngamunye, ngakho-ke ngokungena kwi-Mac App Store, ngokuchofoza kulanda bese ubuyekeza, sizofaka nesistimu yokusebenza entsha kwi-Mac yethu.
Jabulela iMacOS Sierra!
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayifaka kanjani iSierra kusuka ekuqaleni
Amazwana ayi-86, shiya okwakho
UFrancis Pena kusho
Ngingayilanda kanjani kusuka ku-pc
Phendula uFrancis Peña
Ngiyabonga kakhulu ngalolu lwazi olubalulekile, njengoba bengifuna ukuvuselela kusuka ku-0.
Yasmina Macias Perez kusho
Nginokwahlukanisa (ngicabanga ukuthi kubizwa kanjalo) ngeWindows .. ukwenza ukufakwa njengoba besho ukuthi ngizokulahla?
Phendula u-Yasmina Macías Pérez
Nieves Casas hahaha uyangihlola !! Noma kunjalo, nginesiqiniseko sokuthi uma uyithenga, izofika futhi uma kungenjalo .. kuya ngokuthi bangayifaka kuphi lapho, ngoba kwikhompyutha kabhanana banginikeza ukuthi ngiyithathe ngiyenze nabo kusibuyekezo sokugcina
UJordi Gimenez kusho
Uma ufaka kusuka ekuqaleni ulahlekelwa ukwahlukaniswa okwenziwe kepha lapho ungaphinda ukwenze kabusha. Cabanga ukuthi ukufaka kusuka ekuqaleni kusho ukususa konke onakho kwi-Mac yakho (njalo nesipele esiseduze) futhi okubandakanya ukwahlukaniswa, idatha nokunye.
Phendula uJordi Giménez
enric bertomeu kusho
UJordi ngicabanga ukuthi angivumelani nawe, uma uma ufaka kusuka ku-0 ufometha kuphela ukwahlukanisa lapho i-OS iya khona, okunye ukwahlukanisa kuhlala kungashintshi
Phendula ekucebiseni i-bertomeu
Ukulungisa ungakwazi ukufometha ukwahlukaniswa kwe-macOS, kepha kungenzeka ukuthi lapho iningi labasebenzisi lifometha yonke idiski bese liyizinkinga. Vele, engikukhuthazayo ukushiya i-Time Machine kuphela futhi esimweni esihle kakhulu ukwenza isipele kudiski yangaphandle ukuhlanza i-disk lapho i-OS iya khona futhi ungabi nankinga. Ngale ndlela i-disk ifomethwe ngokuphelele futhi kulapho izinkinga ezingavikeleka zivikeleka unyaka wonke.
Ngibonga kakhulu ngeqhaza lakho Enric
UJose Fco Cast kusho
Ungixolele ukungena engxoxweni yakho kodwa kuyicala ukufaka ama-cherries ku-mac. Umbono wami eee
Phendula kuJose Fco Cast
UJose Fco Cast hahaha ngisebenzisa ukaputeni nsuku zonke kepha ngezinjongo zokufunda bekufanele ngithole impilo yami ukuze ngikwazi ukusebenzisa izinhlelo ezifanayo nasekilasini nokuthi ngingenza kuphela ngeWindows, futhi ngiyabonga uNkulunkulu u-Apple unikela ngaleyo ndlela (sebenzisa ezimbili amasistimu afakiwe)
Ngiyabonga kulungile, uma uqala ukufakwa kusuka ekuqaleni, ngikhipha kanjani izinhlelo zokusebenza nedatha engithandayo kwisipele?
Sawubona FidelWare, ovela kwi-Mac App Store izinhlelo zokusebenza ndawonye ne-Time Machine ungathola idatha oyidingayo.
Idiski alikwazanga ukwenziwa ngenxa yephutha: Kuvele iphutha: -10006. Isitholi sithole iphutha: Ayikwazi ukusetha idiski "Faka i-OS X El Capitan" ibe yi- "DMX_Workdisk".
Ngizamile kabili, ngaphandle kwempumelelo.
kuyacaciswa esihlokweni. Leli phutha lijwayelekile ngoba ithuluzi ekuqaleni alisekeli iMacOS Sierra, kepha empeleni isifaki sakhiwe.
UHugo Diaz kusho
Nge-DiskMaker X, awukwazi, lokhu kuvela ekugcineni -_-
Phendula uHugo Diaz
Iphutha liphonswa ngoba silitshela ukuthi liyi-El Capitan futhi empeleni yi-MacOS Sierra kepha umlingani oqalekayo usebenza okufanayo.
I-ASObjC Runner.app ingibuza
Yini engaba khona?
Ngikutholile ku-diskmaker faq:
Ngiqhubeka nokuhlangana nephutha le-ASObjC Runner (Iphutha -43. Ifayela le-ASObjC Runner alitholakalanga)!
Lokhu kuyinkohliso impela. Yisiphazamisi esenzeka ngokungahleliwe ngeLion DiskMaker futhi asinakho ukucaciswa kwangempela, ngaphandle kwephutha lokufaka ikhodi.
Ukuphela kwendlela engithole ukuthi ingasusa inkinga kungaba uku:
Sebenzisa i-Activity Monitor (in / Applicationsl / Utilities) ukuyeka noma isiphi isibonelo se-ASObjC Runner;
Qalisa kabusha iMac yakho;
Bheka futhi ukuthi i-ASObjC Runner isasebenza ku-Activity Monitor;
Bese wethula i-Lion DiskMaker futhi bese uzama ukwakha idiski yakho.
Futhi kwesinye isikhathi, ukusebenzisa iseshini ehlukile, ehlanzekile kungasiza.
Uma unokuqonda okuthile ngale nkinga, ngicela ungithinte.
Ngiyethemba kuyakusiza, maqondana nalokhu
Ngithola iphutha lapho liphela ... haha ​​amanga! I-athikili enhle kakhulu! Ngiyabonga!
Kuqhubeka kwenzeka kimi kepha ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi ngine-beta ye-macOS sierra efakiwe.
Ngiyabonga kakhulu ngosizo.
Kuyamangaza kanjani ... akufanele kube yinkinga ukufakwa kwe-beta ye-MacOS Sierra,
Sitshele uma uthola isisombululo kwabanye ozakwenu.
hahaha, uzoba ...
nokunye okuningi kusho
Yehlulekile ukwenza isheke lesiginesha yokulayisha okukhokhwayo kokufaka.
Phendula ku-nacho moreno
Miguel de la Fuente (@miguelfcaba) kusho
Inginikeza iphutha elifanayo, ngiyicimile futhi ngiyayivula futhi akukho lutho olufakiwe. Kufanele ngibuyise kusuka ku-Time Machine.
Phendula uMiguel de la Fuente (@miguelfcaba)
Sawubona, ithuluzi leDiskMaker libuyekeziwe linikeza ukusekelwa kwe-MacOS Sierra futhi akumele kube yinkinga. Esihlokweni sesivele silungisiwe futhi.
Sanibonani futhi ngiyabonga.
UCesar Augustus kusho
Kungenxa yokuthi i-mac yakho iphumile ekuvumelaniseni isikhathi nosuku, yenza okulandelayo.
1º Iya kusikrini sokufaka esikhulu, iya kuzinsiza, bese uvula i-terminal.
Uma uxhumano lwe-wifi xhuma,
Njengoba uku kwinethiwekhi bhala ku-terminal,
"Usuku" Ngaphandle kwezingcaphuno zeqiniso!.
Isikhathi nosuku kuzovela ,,,
3º Ukukuvuselela ngesikhathi esifanele kusuka kuseva ye-apula, bhala umyalo olandelayo.
ntpdate -u time.apple.com nokushaya i-Return.
Ngiyabonga uCesarAugusto. Isixazululo sakho besiphelele….
Ulale kahle. Ngisula ukwahlukanisa iMacintosh HD kuphela noma ngingasula yonke idiski ngaphandle kwezinkinga?
lapho umsebenzisi ngamunye angenza ngendlela afuna ngayo, ngincoma ukusulwa kwediski okuphelele (inqobo nje uma unekhophi yeTime Machine evikelwe kwenye idiski) kepha ungasusa kuphela ukwahlukanisa kohlelo lokusebenza bese ufaka lapho.
Sawubona, ngikwenze ngazo zombili izinhlelo futhi sengivele ngivuselele futhi iqhubeka nokuphonsa iphutha elifanayo, kungani ngingayixazulula? Sengivele ngiphelelwe ukululama futhi angikwazi ukufaka lutho 🙁
UJuan Jose Burciaga kusho
Bengihlala ngikholelwa, ngephutha, ukuthi ngemuva kokufakwa okuhlanzekile kufanele ngiphinde ngilayishe konke ngosizo lwe-Time Machine, manje ngiyaqonda ukuthi bekungafanele kube njalo, kepha ukucabanga nje ngokufaka yonke i-disk yami yomculo nge-disk futhi ngokungagwegwesi akukwenzi ngifuna ukuvuselela. Ingabe kufanele kube ngale ndlela ngempela?
Phendula ku-juan jose burciaga
Ngenze inqubo yokwakha i-pendrive nge-Disk Maker, ngemuva kokufakwa cishe imizuzu engu-7, kuvela iphutha: »Ayikwazanga ukwenza isignesha yokuqinisekisa ukulayishwa kwesifaki»… kunika kuphela inketho yokwamukela nokubuyisa ngentengo ye- installer futhi, ngidale i-pendrive futhi engiyibuyisile futhi ibonakala ifana ncamashi ... ngicela usize.
Sawubona Jordi, ngenza yonke inqubo obukhulume ngayo ngaphambilini futhi njengoba ubeke amazwana ngithola iphutha. Lapho ngithola imininingwane ngayo (cmd + i), ingiphatha nge-4,6 Gb hhayi i-4,78 GB oyibonisayo.
Kumele ngicabange ukuthi isifaki asikopiswanga kahle cha
David G. kusho
Ngiyenzile kudiski enzima enezingxenye ezintathu, ebeziyi: IZINHLELO ZE-DMG, IMISHINI YESIKHATHI ne-OSX INSTALLER. Ngisebenzise uhlelo ukufaka i-macOS engxenyeni yesifaki sediski ekhishwayo futhi yini engimangazayo ... Uhlelo luye lwasula yonke i-hard disk futhi lwakhomba ukwahlukanisa ... Ngokujabulisayo ngenze ikhophi yezinhlelo ngaphambi. ...
Phendula uDavid G.
Sawubona, ngikwenza ngenguqulo entsha yeDiskmaker X 6 esivele isekela iMacOS Sierra futhi inginika amaphutha. Enye yazo yile:
Kuvele iphutha: -10006. Isitholi sithole iphutha: IDiski "Faka i-MacOS Sierra" ayikwazi ukusethelwa ku- "DMX_Workdisk"
Kubo bonke labo abahlulekayo, zama ukufaka i-Diskmaker futhi bese wenza isifaki ngenguqulo entsha
http://diskmakerx.com Sibuyekeza i-athikili. Ngokwami ​​ngiyifake izolo ebusuku futhi ngaphandle kwezinkinga kepha nge-diskmaker ebuyekeziwe engcono.
Kungenxa yenguqulo entsha lapho ngithola khona amaphutha.
UVictor morales kusho
Sanibonani nonke. Ngisanda kulanda inguqulo yakamuva ye-diskmaker ehoreni eli-1 eledlule futhi iqhubeka ingithumela iphutha elifanayo abalisho "DMX_Workdisk". Ngivele ngingene ku- / Amavolumu futhi akukho okunye kwezinye izinhlobo, kukhona eyodwa kuphela yeMac OS sierra. Kakade dala i-usb futhi, bese uqala kabusha futhi lutho. Kukhona okusebenzelile?
Phendula uVictor Morales
Iqhubeka nokunikeza iphutha -10006 okungenani kimi.
Sawubona, ngithola kanjani ngenqubo yokukopisha iMacOS Sierra kwimemori?
Sawubona, kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi iMacOS Sierra ifake kwimemori?
UHelena Lopez kusho
Inginikeza iphutha le: "Ayikwazanga ukubheka isiginesha yomthwalo wokufaka wesifaki"
Ngenze konke ngeDiskMaker entsha kepha kunginikeza iphutha elifanayo ngaso sonke isikhathi: S
Ngicela isixazululo ngicela !!!
Ngibonga kusengaphambili uJordi
Phendula u-Helena Lopez
ULuis Carlos kusho
Nginombuzo nge-macOSSierra, ingabe ivumela ukufaka izinhlelo zokusebenza ngaphandle kwe-App Store? Ngine-pendrive ebonakala njengetafula lokuhlukanisa futhi angikwazi ukulisusa. Akunginiki inketho yokwakha ukwahlukanisa nomhlahlandlela. Kwenzeka kimi kuphela kulolo pendrive. Ngingayishiya kanjani njengefektri?
Phendula uLuis Carlos
Ngenze ukufaka i-diskmaker entsha futhi yanginikeza iphutha, ngazama ukuyibuyisela ngeTime Machine futhi yanginikeza iphutha. Manje ngizama ukubuyela kumodi yefektri (cmd + R). Sizobona okusunguliwe …… lapho kuvela khona.
IDiskMaker ayisebenzi, ngisebenzise i-Install Disk Creator futhi yasebenza ngo-100%.
Ngibonga kakhulu umhlahlandlela.
Siyabonga ngomnikelo uRicardo sizowubhekela okokufundisa okuzayo! Noma kunjalo iDiskMaker yami yangisebenzela kahle.
Ngiyabonga Richard! Bengingazi futhi ngale nkinga ngingenankinga futhi ngilungele ukufaka kusuka ku-0.
kuhle, ngizamile ukuyifaka kusuka ku-mac futhi ngithola iphutha elifanayo "ayikwazanga ukubheka isiginesha yokulayishwa kokufakwa kwesifaki", futhi lutho.
umuntu usevele unaso isixazululo
ingabe ikhona indlela yokuyifaka ngasekupheleni kuka-2008 mac?
Qaphela ngalolo hlelo lwe- "DiskMaker" alusebenzi ne-OS Sierra. Yize kuthiwa iyahambisana, ayiqhubeki nokugcina imininingwane, iyishiya phakathi (lokho kwenzeke kimi). Ngihlupheke, ngaze ngathola olunye uhlelo olukhonjisiwe kule ndatshana «DiskCreator» futhi manje ngijabule .. haha ​​😀
Sawubona ntambama, bengifuna ukulanda ngqo esitolo sohlelo lokusebenza, ukuze sizovuselelwa ngokuzenzakalela, kepha ngithola iphutha elithi “le disk ayisebenzisi uhlelo lwethebula lokuhlukanisa i-GUID, futhi angazi ukuthi ngenzeni. Ngikuphethe x ukaputeni futhi kungisebenzela kahle, kufanele ngenzeni? ngiyabonga.
Ngiwudale ngeDiskCreator ngathola umyalezo othi: «Isheke lesiginesha yokufaka umthwalo wokufaka alizange lenziwe».
Sengivele ngisuse ukwahlukanisa kwami ​​kokutakula futhi manje angikwazi ukusetha kabusha noma yini, ngithola kuphela inketho yokutakula ku-inthanethi kepha ayisebenzi kimi, angisazi ukuthi ngenzeni futhi, kufanele ngivele ngiyise ekusekelweni isitolo! 🙁
Ngokwethembeka, angiboni nzuzo yokuyifaka kusuka ekuqaleni. Ngisho nale edalwe kuleli khasi ithi "... noma nini lapho sigxuma sisuka kwesinye isistimu yokusebenza kuya kwesinye kuyathakazelisa ukuhlanza iMac", ngakho-ke asikho isidingo sokungena ezinkingeni. Ngizamile ukuvula olunye uhlelo lokusebenza futhi konke kusebenza kahle. Noma "uthengiwe" ku-App Store, iSierra ayiveli noma ngabe usuvele uyilandile.
Kungani impilo iyinkimbinkimbi?
Ake sibheke ukuthi kukhona yini umuntu ongangisiza ngoba angisazi ukuthi wenzani ...
Ngine-retina ye-macbook pro 13 kusuka ngo-2013, ehambisana nayo ngokwe-100%. Vele ukwenza isipele nokunye okunjalo ...
Nginezinto ezimbili ezifakiwe (izibuyekezo) zeSierra futhi kuzo zombili, uma sezifakiwe, iqandisiwe emugqeni wokulayisha ekuqaleni. Njengamanje ngenza ukululama kwesibili kwesipele. Kepha anginasibindi sokufaka okwesithathu ngoba ngesaba ukuthi akukho okuzoshintsha.
Ngidlulise i-Clean My Mac, i-Onyx, i-antivirus eminingana, empeleni konke kuhlanzekile. Idiski enzima eyi-100gb ...
Angazi ukuthi ngiyafisa yini ukufaka kusuka ekuqaleni ngoba ngiyaqiniseka ukuthi ngilahlekelwa uhlelo oluthile ...
Kwake kwenzeka komunye umuntu? Ngabe kukhona ongangisiza?
UBruno pasetti kusho
Uma ngicisha i-macbook bese iqala ngicindezela ku-Alt.I-boot disk iyaphuma kodwa i-usb ene-sierra ayiveli. Angazi ukuthi ngenze kanjani ukuthi ivele. Yini engiyenzayo engalungile?
Phendula uBruno Pasetti
ULuis G kusho
Ngisenenkinga efanayo, sengizamile wonke amathuluzi ashiwo ngenhla ukwenza iMacOS sierra bootable, iphonsa iphutha "ukuqinisekiswa kwesiginesha yokufaka umholo wokufaka akwenziwanga" Ngabe ukhona umuntu ositholile isisombululo salokhu?
Phendula uLuis G
Sawubona, nginenkinga efanayo. Lapho iqeda ukufaka ama-MacOs Sierra kusuka ku-bootable usb, ngithola iphutha "alikwazanga ukwenza ukuqinisekiswa kwesiginesha ekhokhwayo yokufaka" futhi kungikhipha ekufakweni. Ngabe ukhona owaziyo ukuthi angayilungisa kanjani?
Sishiya isixazululo senkinga "ngesiginesha yomthwalo okhokhelwayo ..." https://www.soydemac.com/solucion-la-problema-la-instalacion-macos-sierra-no-se-ha-podido-realizar-la-comprobacion-firma-la-carga-util-del-instalador/
imikhonzo bese usitshela
U-Ed rdz kusho
UJordi Ngiyabonga ngosizo lwakho lomusa. Ngiyakutshela ukuthi nginenkinga "ngesiginesha yomthwalo okhokhelwayo" kepha isixazululo esinikezwe lapha akusona esami, ngoba idatha yosuku neyamanje ilungile. Noma yikuphi ukusikisela?
Phendula u-Ed Rdz
Sawubona Ed Rdz, noma ngabe isikhathi silungile, sishintshe ngesandla. Lokhu kungalungisa inkinga, ukubheka nje ukubona ukuthi ngabe kulungile akwanele. Yenze ibhukwana ku-Terminal.
Ngakolunye uhlangothi, uma ikutshela lokho, zama ukuvuselela ngqo ngaphandle kwesipele noma kusukela ekuqaleni nge-inthanethi. Ngabe ushintshe i-Mac disk? Unayiphi iMac?
Sawubona ntambama, lapho ngizama ukuyifaka, ngithola iphutha lapho ngithi sengivele ngine-10.2 efakiwe, kepha ngifake ukaputeni. Noma yisiphi isixazululo?
ngabe unezinguqulo ze-beta ezifakiwe kwi-Mac yakho? Lokhu kuyamangaza ukuthi uphawula ngoba inguqulo yeSierra ingu-10.12
ivan flores kusho
Sawubona, suku oluhle, ngiyenzile inqubo kodwa uma ufaka futhi ibha yenqubekelaphambili ithi "kusele imizuzwana engu-0" ihlala lapho, futhi ayiqhubeki noma yenze noma yini, ngiyenze kanye futhi bengilinde cishe amahora ayi-8, ngibe sengikwenza futhi inqubo futhi kuthatha amahora ama-3 selokhu kwavela lokho. Yini engingayenza? Ngine-macbookpro 2011
Phendula u-ivan Flores
Lapho izama ukwenza i-usb bootable iDiskMaker ingiphonsela lo myalezo olandelayo: «Isula idrayivu '/ Amavolumu / i-USB' ..» ayiwuqondi umyalezo <>
Ngabe kwenzeka into efanayo nakomunye umuntu? Noma yisiphi isixazululo?
Sawubona, usitholile isisombululo? Kwenzeka okufanayo nakithi !!!
Sawubona Carla, yebo, ngemuva kokuza okuningi nokwenzekayo ngakwazi ukukuxazulula. Ngizamile izikhathi eziyinkulungwane ngeDiskMaker X futhi ihlale ingiphosela iphutha .. Isixazululo: DiskCreator !! 🙂 Ngizokunikeza isixhumanisi sokulanda bese ungitshela ukuthi kuhambe kanjani. https://macdaddy.io/install-disk-creator/
ihlala kubha yelogo engenalutho futhi ayenzi okunye, bese kuthi ngesikhathi esifanayo icime njalonjalo iphindaphindwe kaningi. Yini i-hgfo?
Nginenkinga efanayo, lapho ngiyibheka ifinyelela ku-4.2 gb futhi ayiveli kuma-disk wami ebhuthini lapho ngizama ukuqala kabusha umshini ... ngithola iMACintoch ne-Recovery kuphela ..
Nginama-Imac amabili, elilodwa lisuka ku-2009 elinye lisuka ngo-2011, ngingasebenzisa i-usb efanayo ukufakwa neSierra, ukufakwa okuhlanzekile ku-Imac ngayinye?
Sawubona, ngine-MAC kusukela ngo-2013 eyayinenguqulo efakiwe futhi lapho ngibuyekeza inguqulo yeSierra, ayikwazanga ukufaka isistimu yokusebenza futhi yakhiqiza lo mlayezo "ivolumu iqukethe ukufakwa kwe-mac os noma i-os x okungonakala ... .
Okungikhathazayo, ngiyazi ukuthi ngephutha nokuzethemba ngokweqile ku-MAC, angikaze ngenze isipele.
Angazi noma ngabe i-IOS Sierra ingalandwa iye kwi-USB (kwenye ikhompyutha) bese uyifaka kusuka lapho, ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane.
Sawubona ngifuna ukushintshela e-sierra kodwa ngine-Leopard nekhompyutha yami ivela ku-2010.
Ngabe ngizokwazi ukuyifaka ngqo esitolo se-Appel noma kufanele ngifake uhlelo olukhuluma kuqala ukuze ngikwazi ukusika isaha?
Kade ngizama ukufaka isithombe esikhulu ku-Leopard izinsuku ezimbili futhi ngeke singivumele ngisifake kudiski enginayo ngaphakathi kwe-Mac yami.
Ngifunde esithangamini sokuthi angikwazi ukufaka i-sierra uma ngiyifakile ingwe phambilini. Iqiniso?
Icala lokuthi ngibambekile kancane futhi ngididekile kusukela ekuhlolweni.
Yini ongiluleka ngayo?
Angiqondi ukuthi ubhekisa kuphi engxenyeni lapho i-usb ifomethwe khona, kufanele ngixhume noma iyiphi i-usb ku-mac?.
Nginibonga kusengaphambili; Sanibonani.
Sawubona, ngiqale ngafaka ukaputeni ngabe sengidlulisa i-mac os sierra futhi angizange ngikwenze kusuka ekuqaleni futhi i-maac yami isukela ekupheleni kuka-2009
I-MacOS Sierra ifakwa kukuphi ingxenye "phambilini", okucatshangwa ukuthi ikufaka izicelo ????
Sawubona, ngisanda kuthuthukiselwa ku-mac os sierra, futhi lapho ngivula i-mac yami isithombe sesikrini sokungena asinalutho futhi asikho esinye isithombe, ngenzani?
U-Andres Mendoza kusho
Sanibonani nonke, ngemuva kokwenza konke iMacBookPro yami evela ku-2011 ayiboni makhadi we-SD noma i-PENDRIVE ngemuva kokwenza okuningi ngeDiskmaker x 7 noma i-Diskcreator. Kepha ngizama ukufaka okuhlanzekile ngemuva kokufaka iSierra.
Angazi ukuthi ngabe leso yisizathu sokuthi lapho ngizama ukukhetha ama-boot drive, noma ikhadi le-SD noma iPendrive livela, kuphela i-Hard Drive efakwe yi-laptop yami.
Ngabe ukhona umuntu onganginika isisombululo sokubona ukuthi ngingenza kanye kuphela ukufaka okuhlanzekile?
Ngifuna ukwenza lokho kufakwa okuhlanzekile ngoba nginezinkinga ngeMeyili namanye amaklayenti eposi. Ngemuva kwesikhathi esivulekile bavala ngomsindo.
Ngibheke phambili ekuzwenicngawe.
Phendula u-Andres Mendoza
ngoba ngithola lo mlayezo kwi-mac yami «yokusula idrayivu’ / amavolumu / i-USB '... »ayiwuqondi umyalezo othi« umcimbi sysonotf »
I-Maicol Callero kusho
futhi ngikutholaphi isifaki seMacOS Sierra?
Phendula ku-Maicol Callero
Nginenkinga yokuzama ukuyifaka.
Ngenza zonke izinyathelo, kepha uma ngicisha ikhompyutha, ngiyivule futhi (nge-USB isilungele ukufakwa) bese ucindezela i-ALT lapho umsindo wokuqalisa uvela, i-mac ayiyiboni i-USB njenge-boot disk. Ngibona kuphela i-boot disk ejwayelekile yekhompyutha. Yini engabangelwa lokhu? Ingabe likhona ikhambi?
Sawubona. Kwenzeka okufanayo nakimi. Kungithathe isikhashana ukuthola isixazululo. Uma ubheka i-USB (lapho uneMacOS ubona isithonjana seSierra nefolda ebizwa ngokuthi "Izinsiza" lapho uyivula, uyabona ukuthi izinhlelo zinophawu "lokuvinjelwa" futhi awukwazi ukuzivula. Lokhu kubaluleke kakhulu , ngoba uzozisebenzisa lapho ufometha futhi uqala i-disk. Ukuyixazulula, bekufanele ngiye kwenye i-USB lapho bese ngivele ngine-MacOS El Capitan, ngikopishe lezo zicelo kuyunithi lapho iSierra ikhona kuphela bese ingibona ( ngokucindezela i-ALT ekuqaleni) Akachazanga ukuthi kungani lokho kwenzeka. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha leDiskMaker. Uma ufuna izinhlelo zokusebenza, ngithumele i-imeyili eonyorch@gmail.com
UJavier Alejandro Padilla kusho
Uxolo. Ngizama ukufaka i-OS X SIERRA kwi-MAC yami nge-USB… .. Uma ngizama ukufaka kusuka ku-USB, ibha iyahamba ngaphansi kwe-apula kodwa phakathi liyabanda bese indilinga yemibala ijikela ngapha nangapha kungenzeki ngingenzani? Ngikushiye kanjalo usuku lonke futhi akuqhubeki phambili ngiguliswa yilo MAC omubi
Phendula uJavier Alejandro Padilla
UJose Manuel kusho
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo wakho.Mayelana nokuncamelayo okungaqala ekuqaleni ngaphandle kokulayisha ikhophi ye-Time Machine, ucabangani ngokufuduka kusuka ku-Mac eyodwa kuya kwenye usebenzisa lolu hlelo lokusebenza?
Ake ngichaze, faka iMac entsha isuke ku-0 bese uthuthela idatha yakho ngemuva kwe-mac yakho endala kusuka ku-Time Machine.
Phendula uJose Manuel
Akunakwenzeka kimi ukuthi ngenze i-USB yami ibhuthwe (ngiyizamile nge-8Gb kanye ne-16Gb eyodwa)
Ngizamile ngeDiskMaker X 6 futhi ngithola iphutha elithi «Erasing drive '/ Volumes / BO16GB' ...» aliwuqondi umyalezo othi «event sysonof» futhi ukusuka lapho akwenzeki.
Ngiyivivinyile ngeDisk Creator. Kuyangivumela ukuthi ngikhethe iyunithi ezoqala kabusha futhi nesifaki, kepha lapho nje ngichofoza inkinobho ethi "Dala isifaki" lapho ihlala khona. Sengivele ngishaye inkinobho izikhathi eziyi-100 ezingenzi lutho nhlobo.
Ngiyizamile nangeDisk Drive. Ngokuchofoza i-InstallESD.dmg bese uyibuyisela futhi uyabele i-USB yendawo. Ingitshela ukuthi kufanele ihlole isithombe somthombo futhi lapho isiqeda ingitshela ukuthi "Ayikwazi ukuhlola i-InstallerESD.dmg (Umsebenzi awenziwanga)" Awukho ngokuphelele ...
Ngiphelelwe yithemba, ngabe ukhona omunye umuntu oneminye imibono?
Ngisanda kuyizama nge-UNetbootin futhi hhayi ... Banemania noma yini?
Jordi omuhle, angikaze ngilale izinsuku ezi-3 ngenxa yokuzama ukuvuselela imac mini yami. Iqiniso ngukuthi ingitshela ukuthi isisesikhathini futhi lapho izama ukuqala iphonswe ubusuku bonke futhi ibha ayidluli u-2 noma u-3 mm futhi ayiqali ... Isisombululo esikhona? Ngiyaluma futhi nemibuthano emnyama ekulaleni okuncane kulezi zinsuku!
Ukubingelela nokubonga kusengaphambili
Phendula ku-Fco. UJavier
Sawubona, ngine-13-inch macbook pro, maphakathi no-2012, ngafaka i-sierra futhi konakala. Ngifuna ukufaka i-yosemite futhi ku-diskmaker kubonakala »ukusula idrayivu akuqondi umlayezo womcimbi sysonotf» yini engingayenza?
Uma uhamba ne-iMac yakho, nali ibhokisi lokuvikela eliphakeme layo